Kpọrọ ihe ... Gini mere? | Martech Zone
Anyị na-arụ ọrụ a ọtụtụ ọkaibe ahịa nke ukwuu nke anyị na-arụ ọrụ abụghị mgbagwoju anya… ọ bụ n'ezie dị nnọọ na-agbalị na-elekwasị anya anyị na ndị ahịa, Hazie ọrụ ha, na-emezu na azum mepụtara.
Gini mere ị ji etinye ego karịa n'ime mkpọsa dị mkpirikpi kama itinye ego n'ime atụmatụ dị ogologo oge?
Gini mere ị na-atụ anya ire ahịa karịa mgbe ị na-emeghị ka ahịa azụmaahịa gị baa ụba?
Kedu ihe kpatara ị ka ji edobe ndị ọrụ ere ahịa na ịkwụ ụgwọ mgbe ha anaghị emechi ụzọ ruru eru?
Gini mere ị na-emepe emepe agbanwe n'ime mgbe ị nwere ike ịga zụta ya ọnụ ala, ọsọ ọsọ na mma?
Kedu ihe kpatara na ị na-achọ ịzụlite atụmatụ karịa mgbe ndị ahịa na-efufu ndị na-anaghị arụ ọrụ?
Kedu ihe kpatara ị na - azụ ahịa ndị dị ọnụ ala, mara na akara gị adịghị ọnụ ala?
Gini mere ị ji akwụ mmadụ ụgwọ iji melite saịtị gị mgbe sistemụ njikwa ọdịnaya dị ọnụ?
Kedu ihe kpatara ị ka ji azụ ahịa n'otu ụlọ ọrụ na - enweghị ike igosi ROI ha?
Gini mere i ji etinye ego na mgbasa ozi ohuru mgbe ị na-ekweghi ka nke ikpeazụ mezue?
Kedụ ihe ị na-akwụgo ndị ahịa ọhụụ ọ bụghị ndị gị na ha nọ kemgbe?
Kedu ihe kpatara ị na-akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ kwa Pịa mgbe ị naghị ehichapụ mkpụrụ okwu adịghị mma ma ọ bụ ọbụna nwaa ụdị dị iche iche nke mgbasa ozi gị ma ọ bụ peeji ọdịda?
Gini mere i ji azuta webusaiti ohuru nke gunyeghi usoro mkpanaka, nyocha na ntughari?
Kedu ihe kpatara ị na-akwụ ụgwọ iji kwalite saịtị gị mgbe anaghịachị ya maka ọchụchọ?
Kedu ihe kpatara ị na - azụ ahịa maka saịtị ọhụrụ mgbe ị na - ejighị nke ikpeazụ mee ihe?
Kedu ihe kpatara ị na-akpọsa na saịtị ndị ọzọ mgbe ịnweghị vidiyo na gị onwe gị?
Gini mere i na-agbali ichota na isi okwu igaghi agha agha ma juo ogologo-odu ndi i nwere ike?
Kedu ihe kpatara ị na - ahọrọ mkpụrụokwu dị iche iche nke na - anya ọtụtụ puku ndị ọbịa mgbe ihe niile ịchọrọ bụ ole na ole?
Gịnị mere i ji na-agbalị ọkwá mba mgbe ị tọghị ọkwa n’obodo gị?
Gini mere i ji na-agbali ichoro ka nma na isi okwu nke na-agaghi agbanwe n’ime ahia?
Kedu ihe ị na-atụle nchịkọta kwa izu mgbe ịtọbeghị ihe omume, ebumnuche, nsụgharị ntụgharị, njikọta ecommerce ma ọ bụ ọdụ ahịa?
Gini mere ichoro iji banye na soshal midia mgbe ị matara na ị chọghị ịbụ mmadụ?
Kedu ihe kpatara ị ji ere ahịa na Twitter mgbe saịtị gị anaghị agbanwe ndị ọbịa?
Kedu ihe kpatara ị na-achọ ndị debanyere aha ọhụrụ mgbe ọtụtụ na-ewepu aha na email gị?
Gịnị mere ị na-ezipụ gị crappy -enwe kwa izu kpaliri kama iziga ihe dị egwu kwa ọnwa email nke na-ebute nsonaazụ n'ezie?
Kedu ihe kpatara ị jiri ere ahịa na Facebook mgbe ị nweghị mmemme ọzụzụ email?
Kedu ihe kpatara ị ji ede blọgụ na ngalaba nke ị nweghị… ịmepụta uru na ikike maka ihe ị na-agaghị erite na ya?
Gini mere ị na-ede blọgụ ma ghara ịkwalite ọdịnaya ị nọrọ ọtụtụ oge dee?
Gịnị mere na ị na-arụ ọrụ na a malitegharịa? Great ọrụ mgbe abịa site na-edo a malitegharịa ọzọ?
Gini mere ị ga-eji rụọ ọrụ kwa ụbọchị na-atụ ụjọ ihe ị na-eme kama ịhapụ ime na ịme ihe ị hụrụ n'anya?
Kedu ihe kpatara na ị nọ na Twitter na Facebook ma ghara ịde blọgụ?
Gini mere ị na-amalite mmemme email mgbe saịtị gị anaghị arụ ọrụ?
Gini mere ị na-echegbu onwe gị banyere ọnụego ibiaghachi mgbe ị nweghị ihe ọ bụla na saịtị gị iji mee ka ndị mmadụ tinye aka?
Kedu ihe kpatara ị na-ede ọdịnaya karịa mgbe ịnweghị foto gị na saịtị gị ka ndị mmadụ mara onye ị bụ?
Gini mere iji de ihe di nma ma nye gi ya na saiti i choro?
Gịnị mere i ji egbusi oge na-eche maka esote nnukwu ihe kama ịchịkwa ihe i nwere?
Gini mere iji gbalịa ime ihe niile n'onwe gị kama ịchọ enyemaka?
M na-egwuri egwu mgbe mgbe na ndị mmadụ na m bụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi mana anaghị m agakwuru ndị mmadụ gbasara mgbasa ozi. Ọ bụ eziokwu, n'agbanyeghị. Taa otu n'ime ndị ahịa anyị malitere Facebook peeji nke ụlọ ọrụ ha… 6 ọnwa mgbe anyị malitere iso ha na-arụ ọrụ. Ọ ga-abụrịrị ihe na-abaghị uru nye m ka ha daba n'ime usoro mgbasa ozi ọha na eze nyere na ha anaghị akwụ ụgwọ ọrụ niile ha na-arụ.
Onye ọ bụla na-mgbe niile pushing marketers ime ihe ọhụrụ, dị iche iche, na-akpali akpali, wdg… ma na-enweghị oké ntọala iwu n'elu, ọ bụ ihe niile a igbu oge na ego. Kedu ọrụ ị na-arụ na ịgaghị abụ?
Ọkt 5, 2011 na 6:41 PM
Doug, nnukwu post. Naanị ịmata ihe ị na-eji iji mepụta ntinye a site na idetuo na mado na blọọgụ gị:
I Copy / tapawa “Gịnị ka ị na-arụ ọrụ na ị na-ekwesịghị ịbụ?”
-> Gụkwuo: https://martech.zone/marketing/seriously-why-are-you/#ixzz1ZwreWPmh ”
Ọkt 5, 2011 na 6:46 PM
Ọ na-enyocha mmadụ ole na-eme kopi ahụ ma, ọ bụrụ na ha ejiri njikọ enyere, na-eme ka ị mara na ha laghachiri na saịtị gị site na ederede ederede! Ezi ihe!